Yosef siee Yakob wɔ Kaanan (1-14)
Yosef maa ne nuanom hui sɛ ɔde wɔn bɔne akyɛ wɔn (15-21)
Yosef nsɛm a etwa to ne ne wu (22-26)
Yosef kyerɛɛ nea wɔnyɛ ne nnompe (25)
50 Ɛnna Yosef de ne ti too ne papa so+ sui, na ofew n’ano. 2 Afei Yosef ka kyerɛɛ ne nkoa a wɔyɛ nnuruyɛfo no sɛ wɔnhyɛ ne papa aduru.+ Enti nnuruyɛfo no hyɛɛ Israel aduru, 3 na sɛnea na wɔyɛ no, wɔde adaduanan na ɛhyɛɛ no aduru. Na Egyptfo no suu no adaduɔson. 4 Bere a wosuu no wiei no, Yosef ka kyerɛɛ Farao ahemfi mpanyimfo sɛ: “Sɛ manya mo anim dom a, ɛnde mesrɛ mo monka nkyerɛ Farao sɛ: 5 ‘Me papa ka kyerɛɛ me sɛ: “Hwɛ, merebewu.+ Ka me ntam+ sɛ ɔda a mabɔ wɔ Kaanan asaase so no,+ emu na wubesie me.”+ Enti mesrɛ wo, ma minkosie me papa, na miwie a masan aba.’” 6 Farao kae sɛ: “Kosie wo papa sɛnea ɔma wokaa ntam no.”+ 7 Enti Yosef siim sɛ ɔrekosie ne papa, na Farao nkoa nyinaa kogyaa no, Farao fi mpanyimfo+ ne Egypt asaase so mpanyimfo nyinaa kɔɔ bi, 8 na Yosef fifo nyinaa ne ne nuanom ne ne papa fifo ne no kɔe.+ Wɔn mma nkumaa ne wɔn nguan ne anantwi nkutoo na wogyaw wɔn Gosen asaase so. 9 Wɔrekɔ nso, wɔde nteaseɛnam+ ne nnipa a wɔtete apɔnkɔ so kaa wɔn ho kɔe, na na nnipa a wɔka ho no dɔɔso. 10 Afei wokoduu Atad awiporowbea wɔ Yordan mpɔtam hɔ, na wosu bɔɔ bena denneennen wɔ hɔ; nnanson na ɔde suu ne papa. 11 Bere a Kaananfo a wɔte asaase no so huu sɛnea wɔregyam no wɔ Atad awiporowbea no, wɔteɛɛm sɛ: “Eyi yɛ Egyptfo ayi kɛse!” Enti na wɔtoo hɔ din Abel-Misraim;* ɛwɔ Yordan mpɔtam. 12 Enti ne mma no yɛɛ nea ɔkae sɛ wɔnyɛ no pɛpɛɛpɛ.+ 13 Ne mma no de no kɔɔ Kaanan asaase so kosiee no ɔbodan mu wɔ Makpela asaase so wɔ Mamre anim. Asaase yi na Abraham tɔ fii Hitini Efron hɔ de yɛɛ amusiei no.+ 14 Yosef siee ne papa wiei no, ɔne ne nuanom ne wɔn a ɔne wɔn kosiee ne papa no nyinaa san baa Egypt. 15 Bere a Yosef nuanom hui sɛ afei wɔn papa awu no, wɔkae sɛ: “Ebia yɛn ho asɛm da so hyɛ Yosef mu, na bɔne a yɛayɛ atia no nyinaa, ɔbɛyɛ yɛn bi atua ka.”+ 16 Enti wɔde asɛm yi kɔtoo Yosef anim sɛ: “Ansa na wo papa rewu no, ahyɛde a ɔde maa yɛn ne sɛ: 17 ‘Monka nkyerɛ Yosef sɛ: “Mesrɛ wo, fa wo nuanom mfomso ne bɔne a wɔayɛ wo nyinaa kyɛ wɔn.”’ Enti yɛsrɛ wo, fa bɔne a wo papa Nyankopɔn nkoa ayɛ atia wo no kyɛ yɛn.” Bere a wɔkaa saa no, Yosef sui. 18 Ɛnna ne nuanom bebutubutuw n’anim kae sɛ: “Yɛn ni, yɛyɛ wo nkoa!”+ 19 Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Munnsuro. Adɛn, meyɛ Onyankopɔn? 20 Mo de, na anka mopɛ sɛ moyɛ me bɔne,+ nanso na Onyankopɔn adwene ne sɛ ɔbɛma biribi pa afi mu aba na ɔde agye nnipa bebree nkwa, sɛnea ɛnnɛ ɔreyɛ yi.+ 21 Enti munnsuro. Mɛkɔ so ara ama mo ne mo mma nkumaa nyinaa aduan.”+ Ɔkaa saa de kyekyee wɔn werɛ kaa wɔn koma too wɔn yam. 22 Na Yosef ne ne papa fifo kɔɔ so tenaa Egypt, na odii mfe 110. 23 Yosef de n’ani huu Efraim mmanana*+ ne Manase ba Makir+ nso mma. Wɔwoo wɔn guu Yosef nan so.* 24 Akyiri yi, Yosef ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ: “Merebewu, nanso Onyankopɔn betwa n’ani abɛhwɛ mo,+ na obeyi mo afi asaase yi so de mo akɔ asaase a ɔkaa Abraham, Isak, ne Yakob ntam sɛ ɔde bɛma mo no so.”+ 25 Enti Yosef ka kyerɛɛ Israel mma no sɛ: “Ɔkwan biara so Onyankopɔn betwa n’ani abɛhwɛ mo, enti monka me ntam sɛ mode me nnompe befi ha akɔ.”+ 26 Na Yosef wui a na wadi mfe 110; wɔhyɛɛ no aduru+ de no too adaka mu wɔ Egypt.
^ Ɛkyerɛ, “Egyptfo ayi.”
^ Anaa “Efraim awo ntoatoaso abiɛsa.”
^ Kyerɛ sɛ, ɔfaa wɔn sɛ ne mma a ɔpɛ wɔn asɛm paa.